Nwa amaala ST Kit na NEVIS na oyiyi | AAAA NA-ADV
Nwa amaala ST Kit na NEVIS na foto
St Kitts na Nevis ensmụ amaala na-ele ya anya
Kemgbe ngwụsị afọ 19-ndị afọ, ndị ala ọzọ nwere ohere ịghọ nwa amaala nke mba ọzọ maka itinye ego na ụlọ.
A na-atụ aro ka ị nweta ọnọdụ nwa amaala maka nkwụghachi ego nke $ 150 ma ọ bụ $ 000 na $ 200. Ekwenyere na nke a bụ oke nhọrọ, ebe ọ bụ na enwere ike iweghachi ego na afọ ole na ole.
Ọ na - eme n'ụzọ a - onye na - etinye ego na - akwụ ụgwọ maka ihe onwunwe, enwere ike ree ma ọ bụ kwụọ ụgwọ.
Maka ebumnuche a, ịkwesighi ịmara asụsụ mba ọzọ, akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ ma ọ bụ machibidoro gị ịga mba ọzọ.
Iji nweta ụmụ amaala, onye na-achụ ego ga-emerịrị ọtụtụ ọnọdụ:
- Bụrụ afọ 18 ma ọ bụ karịa;
- ghara ịbụ onye a mara ikpe na mbụ;
- Bụrụ onye kwesiri ntukwasi obi;
- Nwee ike, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji kwado mmalite ego;
- Enweghị nsogbu ahụike ọ bụla.
Ensmụ amaala na-emetụtakwa:
- Di / Nwunye;
- undermụaka nọ n'okpuru afọ 29;
- Ndị nne na nna karịrị 55;
- Brothersmụnna nwoke ma ọ bụ ụmụnne ndị nwanyị na-erubeghị afọ 29.
Ọnọdụ bụ isi bụ ntụkwasị obi nke ihe onwunwe na ndị ọchụnta ego nke ndị ezinụlọ ya.
Nhọrọ ntinye ego nwere ike ịbụ ndị a:
1) ugwo oge;
Ntụkwasị obi ntụkwasị obi bụ: $ 7500 maka onye na-etinye ego, $ 7500 maka onye na-etinye ego + $ 4000 maka di / nwunye, $ 11 maka di na nwunye + $ 500 maka ụmụaka ma ọ bụ ihe karịrị 4000 afọ.
2) yingzụta ezigbo ala;
A na-atụ aro itinye ego $ 200 n'ụlọ gọọmentị kwadoro (ire ga-ekwe omume mgbe afọ 000 gasịrị), site na $ 7 n'ụlọ ndị ọzọ (ọ ga-ekwe omume mgbe afọ 400 gasịrị).
Ikwesị ntụkwasị obi: $ 7500 maka onye na-etinye ego, $ 7500 maka onye na-etinye ego + $ 4000 maka di / nwunye, $ 11 maka di na nwunye + $ 500 maka obere ma ọ bụ okenye ezinụlọ.
Administrativegwọ nlekọta bụ: $ 35 maka onye na-etinye ego, $ 000 maka onye na-etinye ego + $ 35 maka di / nwunye, $ 000 maka di na nwunye + $ 20 maka nwatakịrị ma ọ bụ nne na nna na $ 000 maka nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne nwanyị.
Iji nweta ụmụ amaala, ị ga-eme ihe ndị a
1) Nyocha mbụ (were 1 ruo ụbọchị 3):
- kwado mmemme ọzọ ma ọ bụrụ na nsogbu bilitere.
2) Mmezu nke nkwekọrịta (na-ewere ọnọdụ na ụbọchị 1);
Ọ dị mkpa ịnye akwụkwọ ikike ngafe nke onye ọ bụla n'ezinụlọ.
3) Ndebanye aha nke akwụkwọ (na-ewere ọnọdụ na izu 1):
- Ideju akwukwo a site na enyemaka nke onye oka iwu, mbinye aka;
- Agafe nyocha ahụike.
4) Nyocha na-esote (na-ewere ọnọdụ na ọnwa 1-4):
- Nyefee nke akwụkwọ;
- Inweta nkwenye;
- Itinye ego.
5) Inweta paspọtụ (na-ewere ọnọdụ na izu 1):
- Ntinye nke paspọtụ nwa amaala.
Nhọrọ ndị ọzọ a ga - ekwe omume:
1) Antigua na Barbuda;
1) Enweghị visa achọrọ ịbanye mba 157;
2) Ohere inweta visa ogologo oge na United States (maka afọ 10);
3) tonweta ụlọ akụ Europe;
4) O nwere ike inweta njikarịcha ụtụ isi.
Kedu ihe ụmụ amaala na-enye?
Isi uru nke inweta ụmụ amaala:
- Ikike ime njem n’oge ọ bụla dabara adaba n’ụwa;
- Nnwere onwe ego;
- Enwere ike ịbụ nwaamaala maka ezinụlọ dum;
- Ngwa ngwa ma dị mfe.
Kedu ihe nwere ike ịbụ nhọrọ nke onyinye?
Ndị isi nwere ike ịbụ:
- Ntinye ego na steeti steeti;
- zụta ebe obibi.
Themụ nke ndị ọchụnta ego nwere ike ịbụ ụmụ amaala?
Olee akwụkwọ ndị ị chọrọ inye?
- Mpempe akwụkwọ ikike ngafe, asambodo ọmụmụ nke ndị otu ezi na ụlọ;
- Akwukwo ajuju nke ndi ocha ego;
- foto 6;
- Akwụkwọ nke enweghị ndekọ mpụ;
- Akwụkwọ alụmdi na nwunye mbụ;
- Nkwenye nke ebe nnata ego;
- copydị akwụkwọ ịzụta na ire ere.
Kedu ọnọdụ ndị ị nwere ike ịjụ?
- Ọ bụrụ na ọorụ adịghị izute ọnọdụ nke usoro ihe omume;
- Ọ dị n'okpuru afọ 18;
- Ikpe gara aga;
- Enweghi ike ikwenye na iwu nke ịnata ego;
- Obere ego;
- Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nsogbu ahụ ike.
Ego ole ka m kwesịrị ịkwụ?
Ego ahụ dịgasị iche dabere n'ụzọ ị si etinye ego na ọnụ ọgụgụ ndị otu ezinụlọ.
1) Purzụta ebe obibi:
- $ 200 - ruo afọ 000 ma ọ bụ 7% - ruo afọ 400 - ego itinye ego;
- $ 35 - nchịkwa ego maka isi ego;
- $ 20 - ego nchịkwa maka di ma ọ bụ nwunye;
- $ 10 - nchịkwa ego maka nwa ọ bụla sochiri.
2) Onyinye ebere:
- $ 150 - maka ezinụlọ ruru mmadụ 000;
- $ 160 - maka ezinụlọ nke mmadụ 000.
Ebe a na-achọghị ka visa ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụ amaala na-agụ ebe a
Gịnị mere o ji baa uru itinye akwụkwọ maka ịbụ nwa amaala site n'aka anyị?
1) Akwụkwọ ikike gọọmentị;
2) Ọrụ ndị ọzọ;
3) 100% ndị ahịa nwere afọ ojuju.
Bụ nwa amaala nke Saint Kitts na Nevis + Companylọ ọrụ na Slovenia + Ikike obibi nke Slovenia
Ọnụahịa na arịrịọ
Bụ nwa amaala Saint Lucia + ikike obibi nke France
Nwaamaala nke Dominica + Ngbanwe aha + Companylọ ọrụ na Europe + Akaụntụ Banki
Bụ nwa amaala nke Saint Kitts na Nevis + Ebe Obibi Isi + Akaụntụ Akaụntụ
Ensbụ nwa amaala nke Saint Kitts na Nevis + Offshore Company + Caribbean Yacht Registration
↑ Nwaamaala nke Saint Kitts ↑ Ажданство Сент-Китс и Невис ↑ Ensmụ amaala nke Saint Kitts na Nevis na-efu ↑ Ebe obibi Saint Kitts na Nevis ↑ Akwụkwọ amaala nke Saint Kitts na Nevis ↑ Etu ị ga-esi nweta amaala nke Saint Kitts na Nevis ↑ Ọnụ inweta ụmụ amaala nke Saint Kitts na Nevis ↑ Ọnọdụ maka inweta ụmụ amaala nke Saint Kitts na Nevis ↑